Fahavitsian’ny mpirotsa-kofidina : nandefa taratasy any amin’ny governemanta ny Ceni | NewsMada
Fahavitsian’ny mpirotsa-kofidina : nandefa taratasy any amin’ny governemanta ny Ceni
“Nanao fivoriambe ny Ceni, ary nanapa-kevitra hampahafantatra ny zava-misy amin’ny governemanta. Nanoratra any amin’ny governemanta ny Ceni, ary voalaza amin’izany ny zava-misy.”
Io ny nambaran’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, teny Alarobia, omaly, manoloana ny fahavitsian’ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina ho ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna.
Omaly tamin’ny 12 ora antoandro, ohatra, kaominina 560 amin’ny 1 695 no naharaisana antontan-taratasy firotsahan-kofidina amin’ny fifidianana ben’ny Tanàna. Kaominina 326 no naharaisana firotsahan-kofidina ho mpanolotsain’ny Tanàna.
Tsy mitaky amin’ny governemanta amin’ny hanemorana na hitazonana ny fe-potoana farany fandraisana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina, omaly tamin’ny 5 ora hariva ny Ceni, fa mampahafantatra ny toe-javatra.
Tsy hihoatra ny 15 septambra ny fihemorana
Raha manapa-kevitra ny filankevitry ny governemanta hanemorana ny fe-potoana omaly, araka ny fanazavany, tsy tokony hihoatra ny 15 septambra ho avy izao ny fe-potoana fandraisana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidiana. “Raha aorian’ny 15 septambra izany, manahy ny Ceni fa mety hisy fiantraikany eo amin’ny tetiandrom-pifidianana izay efa napetraka hitanana ny fifidianana ho amin’ny 27 novambra”, hoy izy.
Didim-panjakana noraisina teo anivon’ny filankevitry ny governemanta no nametra io fe-potoana fandraisana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina io. Mampahafantatra ny zava-misy ny anton’ny taratasy nalefan’ny Ceni any amin’ny governemanta, izay tompon’ny fanapahan-kevitra amin’ny hanemorana na hitazonana izay fe-potoana izay.
Na izany aza, niandry ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina hatramin’ny fotoana farany ny teny anivon’ny Ovec, na misy na tsia ny fanemorana ny fe-potoana fandraisana ny ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina.